तपाईलाई "ग्रह" प्लूटोको बारेमा जान्नुपर्ने सबै कुरा नेटवर्क मौसम विज्ञान
प्लूटो, बिर्सिएको ग्रह जुन अब कुनै ग्रह नै छैन। हाम्रोमा सौर्य प्रणाली यो भन्दा पहिले त्यहाँ नौ ग्रहहरू थिए जुन एउटा ग्रहको पुन: परिभाषा गरिएको थिएन र थिएन र प्लूटोलाई ग्रहहरूको संयोजनबाट बाहिर आउनुपर्‍यो। ग्रह कोटिमा years 75 बर्ष पछि, २०० in मा यसलाई बौने ग्रह मानिन्थ्यो। यद्यपि यस ग्रहको महत्त्व एकदम ठूलो छ, किनकि यसको कक्षाबाट जाने दिव्य शरीरहरूलाई प्लुटोइड भनिन्छ।
यस लेखमा हामी तपाईंलाई सबै रहस्य र विशेषताहरू बताउन जाँदैछौं बौना ग्रह प्लूटो। के तपाई यस बारे थप जान्न चाहानुहुन्छ? थप जान्नको लागि पढ्नुहोस्।
1 प्लूटो विशेषताहरु
2 बौने ग्रहको बारेमा जानकारी
3 वातावरण र संरचना
4 प्लूटोको घुमाउने
यो बौने ग्रह सूर्य वरिपरि जान्छ प्रत्येक २247,7..5.900 वर्षमा र औसत XNUMX..XNUMX अरब किलोमिटरको यात्रा गरेर यो गर्दछ। प्लूटोको द्रव्यमान पृथ्वीको ०.०० २१ गुणा बराबर वा हाम्रो चन्द्रमाको पाँच भागको बराबर हो। यो एक ग्रह मान्न यो धेरै सानो बनाउँछ।
यो सत्य हो कि years 75 बर्षदेखि यो अन्तर्राष्ट्रिय खगोल संघ द्वारा ग्रह बनेको छ। सन्‌ १ 1930 XNUMX० मा यसलाई अंडरवर्ल्डको रोमन देवताको नाममा राखियो।
यस ग्रहको आविष्कारका लागि धन्यवाद, कुइपर बेल्ट जस्ता महान खोजहरू भए। यो सबैभन्दा ठूलो बौने ग्रह मानिन्छ र उनको पछाडि एरिस। यो मुख्यतया केही प्रकारको बरफबाट बनेको हुन्छ। हामी फ्रिज गरिएको मिथेन, पानीको अर्को र चट्टानको अर्को मिलेर बनेको बरफ पाउँछौं।
सन् १ 1930 .० देखि यती प्रविधि त्यति उन्नत थिएन किनकि पृथ्वीदेखि टाढासम्म शरीरको महान खोजहरू उपलब्ध गराइएको थियो। त्यसबेला सम्म यो एक मात्र ग्रह थियो जुन कुनै अन्तरिक्ष यानले भ्रमण गरेको थिएन।
जुलाई २०१ 2015 मा, एउटा नयाँ अन्तरिक्ष अभियानलाई धन्यवाद छ जसले हाम्रो ग्रह २०० 2006 मा छोडेको थियो, यसले बौना ग्रहमा पुग्न सक्षम भयो, सूचनाको ठूलो मात्रा प्राप्त गर्दै। जानकारी हाम्रो ग्रह पुग्न एक वर्ष लाग्यो।
बौने ग्रहको बारेमा जानकारी
टेक्नोलोजीको बृद्धि र विकासको लागि धन्यबाद, प्लूटोको बारेमा ठूलो नतीजा र जानकारी प्राप्त भइरहेको छ। यसको कक्षा यसको सेटेलाइटको साथ रोटेशनको सम्बन्ध, रोटेशनको अक्ष, र यसले पुग्ने प्रकाशको मात्रामा भिन्नता दिएर एकदम अनौंठो छ। यी सबै चरहरूले यस बौने ग्रहलाई वैज्ञानिक समुदायको लागि ठूलो आकर्षण बनाउँछ।
र यो यो हो कि सूर्यबाट सूर्यका अन्य ग्रहहरू भन्दा बढी छ जुन सौर प्रणाली बनाउँछ। जबकि, कक्षाको विलक्षणता को कारण, यो नेप्च्यून भन्दा २० भन्दा बढी आफ्नो कक्षा को लागी। जनवरी १ 20।। मा प्लूटो नेप्च्यूनको कक्षामा पार भयो र सूर्यको नजिकै रह्यो मार्च १ 1999 2226 17,2 सम्म। यो घटना सेप्टेम्बर २२२XNUMX सम्म फेरि देखा पर्ने छैन। एक ग्रहले अर्को ग्रहको कक्षामा प्रवेश गरे पनि त्यहाँ टकराव हुने कुनै सम्भावना छैन। यो किनभने १ XNUMX.२ डिग्रीको कक्षा ग्रहणको विमानको सम्बन्धमा छ। यसका लागि धन्यवाद, कक्षाको मार्गको मतलब ग्रहहरू कहिल्यै फेला परेनन्।
प्लूटोसँग पाँचवटा चन्द्रमाहरू छन्। यद्यपि यो हाम्रो ग्रहको तुलनामा धेरै सानो आकारको छ, यो हामी भन्दा mo चन्द्रमाहरू बढी छ। सबैभन्दा ठूलो चंद्रलाई क्यारोन भनिन्छ र यो आधा प्लूटो आयाम हो।
वातावरण र संरचना
प्लूटोको वातावरण%%% नाइट्रोजन, मिथेन हो र कार्बन मोनोअक्साइड को केहि ट्रेसहरू। यी ग्यासहरूले ग्रहको सतहमा केही दबाब दिन्छ। यद्यपि यो समुद्रको सतहमा पृथ्वीमा हुने दबाब भन्दा लगभग १०,००० कमजोर छ।
ठोस मिथेन पनि भेट्टाइन्छ, त्यसैले यो अनुमान गरिएको छ कि यस बौने ग्रहमा तापक्रम degrees० डिग्री भन्दा कम केल्विन हो। विचित्र प्रकारको कक्षाका कारण, तापक्रमसँग यसको धेरै भिन्नताहरू हुन्छ। प्लूटोले सूर्यलाई Ast० खगोल सम्बन्धी एकाइहरू सम्म पुग्न सक्छ र 30० सम्म टाढा जान सक्छ। यो सूर्यबाट टाढा जाँदा ग्रहमा पातलो वातावरण देखा पर्दछ जुन जमिनमा जमिनमा खस्छ र सतहमा खस्दछ।
जस्तो अन्य ग्रहहरू जस्तो छैन स्याटर्न y बृहस्पति, अरू ग्रहहरूको तुलनामा प्लूटो एकदम चट्टानी छ। अध्ययन गरिसकेपछि, यो निष्कर्षमा पुगेको छ कि कम तापक्रमका कारण यस बौने ग्रहका अधिकांश चट्टानहरू बरफसँग मिसाइएको छ। हामीले पहिले देखिसकेका विभिन्न उत्पत्तिहरूको बरफ। केहि मीथेनसँग मिसिए, कोही पानीसँग मिसाए।
यो रासायनिक संयोजनको प्रकार मान्न सकिन्छ जुन ग्रहको गठनको क्रममा कम तापक्रम र दबाबमा हुन्छ। केही वैज्ञानिकहरूसँग छ सिद्धान्त कि प्लूटो नेप्च्यून को हराएको उपग्रह हो। यो किनभने यस्तो सम्भव छ कि यो बौने ग्रहलाई सौर्यमण्डलको निर्माणको क्रममा फरक कक्षामा फ्याँकियो। तसर्थ, टकरावको परिणामस्वरूप लाइटर सामग्रीको स .्ग्रहको परिणामको रूपमा चेरोन गठन हुन्छ।
प्लूटो आफूलाई वरिपरि जान 6384 takesXNUMX। दिन लाग्छ। किनकि यसले यसको सेटेलाइटको कक्षासँग सि a्क्रोनाइज तरिकाले गर्दछ। यसको कारणले प्लूटो र क्यारोन जहिले पनि एक अर्काको अनुहारमा हुन्छन्। पृथ्वीको परिक्रमा को अक्ष २ 23 डिग्री छ। अर्को तर्फ, यो ग्रहगतको १२२ डिग्री छ। ध्रुवहरु लगभग आफ्नो कक्षा मा छन्।
जब यो पहिलो फेला परेको थियो, यसको दक्षिण ध्रुवबाट चमक देखियो। प्लूटोको हाम्रो दृश्य परिवर्तन भएपछि, ग्रह बिस्तारै देखिन्थ्यो। वर्तमानमा हामी पृथ्वीबाट यस ग्रहको भूमध्यरेखा देख्न सक्छौं।
१ 1985 1990 र ​​१ XNUMX XNUMX ० बीचमा, हाम्रो ग्रह क्यारोनको कक्षामा पigned्क्तिबद्ध गरिएको थियो। यस कारणले गर्दा, प्लूटोको प्रत्येक दिनको ग्रहण अवलोकन गर्न सकिन्छ। यस तथ्यलाई धन्यबाद, बौने ग्रहको अल्बेडोको बारेमा धेरै जानकारी स .्कलन गर्न सकिन्छ। हामीलाई याद छ कि अलबेडो भनेको सौर्य विकिरणको ग्रहको परावर्तनशीलतालाई परिभाषित गर्दछ।
मलाई आशा छ कि यस जानकारीको साथ तपाईले बौने ग्रह प्लूटो र यसको जिज्ञासालाई राम्ररी चिन्न सक्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » खगोल विज्ञान » "ग्रह" प्लूटो
डानिएला मोरालेस हर्नांडेज भन्यो
र धन्यबाद, यसले मलाई ठूलो काम गर्न मद्दत गर्‍यो !!
डेनिला मोरालेस हर्नान्डेजलाई जवाफ दिनुहोस्